Ilyaas Bare oo bad-baaday xili ay al-shabaab qabsadeen deegaanka laga doorto ee Kenya (dhegeyso) – Radio Daljir
Ilyaas Bare oo bad-baaday xili ay al-shabaab qabsadeen deegaanka laga doorto ee Kenya (dhegeyso)
Agoosto 17, 2013 3:56 b 0
Gaarisa, August 17, 2013 – Ururka Al-shabaab ayaa qabsaday casar liiqii shalayto deegaanka Galmagaalo oo ka tirsan gobolka Woqooyi Bari ee dalka Kenya, halkaasi oo ay ku dileen 2 Askari oo ka tirsan kuwa booliska ee, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Aadan sugow oo horey u ahaa mudane laga soo doorto deegaankaas oo la hadlay radio Daljir wuxuu sheegay in ay ururku gacanta ku dhigeen deegaanka, oo ay dileen qaar ka tirsan ciidankii booliska ee halkaas joogay.
Mudane Sugow wuxuu u sababeeyey qabasashada Al-shabaab ee deegaankaas in ay tahay iyadoo deegaanku ku yaalo meel ka fog deeganada kale ee gobolka, sidoo kale wuxuu sheegay in aysan joogin ciidan badan oo ay leedahay Kenya.
Mudane Ilyaas Barre Shiil oo haatan ah xilibaan ka tirsan Baarlamanka Kenya isla markaasna laga soo doorto deegaankaas, isagoo la hadlay Daljir wuxuu sheegay in weerarka isaga lala damacsanaa, balse uu isagu deegaanka ka baxay wax yar ka hor marka ay Al-shabaab qabsadeen.
Dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-shabaab ee qabsaday deegaankaas ayaa wararku sheegayaan in ay ka bexeen oo ay dib ugu noqdeen dhulka duurka ah ee magaalada, ilaa haddana dowladda Kenya kama aysan hadlin weerarkaas ay ururka ka geysteen gudaha Kenya.
Halkan ka dhegeyso hadalka Xilibaan ilyaas Bare Shiil oo arintaasi uga waramay Radio Daljir
Warfaafinta Soomaaliya oo ku baaqday in la baaro rag hubaysan oo saaka dilay Eng. Axmed Shariif